Ichina i-CE ye-ISO eqinisekisiweyo yeModeli ye-HE15 encinci yegadi eyenziweyo e-China YOKUthengiswa kweemveliso kunye nabenzi Ukunyaniseka
I-CE ye-ISO eqinisekisiweyo yeModeli ye-HE15 encinci yegadi eyenziweyo e-China Yathengiswa
Ukulawula kulula ukuyisebenzisa kwaye i-Intuitive Next Generation LCD esweni ibonelela ngokulula ukufunda ulwazi ngomatshini.
Ukusebenza okukhulu kuyilo oluhlanganisiweyo
Ukunyusa okunamandla kunye nokumba ukusebenza kukunceda ukuba wenze umsebenzi ngokukhawuleza. Ukuhanjiswa kwangaphantsi okurhoxiswayo kukuvumela ukuba ufikelele kwaye usebenze kwezona ndawo ziqinileyo. Dig-to-blade kunye ne-dozer yeempawu zokudada zivumela ukucoca ngokulula.
Ukhuseleko kwindawo yejbo:
Ukhuseleko lwakho yeyona nto iphambili kuthi. Isicoci esincinci senzelwe ukukunceda ukuba uhlale ukhuselekile emsebenzini. Izibane zomsebenzi ezithembekileyo kunye nebhanti yesihlalo ebuyisekayo ebuyayo ziimpawu nje ezimbalwa zokhuseleko esizakhele kumatshini.
Iindleko zokusebenza ezisezantsi:
Ukuxhotyiswa ngeempawu ezinjenge-auto idle, ukuvala i-auto injini, kunye nokusebenza kakuhle kwe-hydraulic kunye nempompo yokuguquguquka okungafaniyo, i-mini excavator yenzelwe ukunciphisa iindleko zakho zokusebenza engqondweni.
Imodeli ye-HE-15 ye-mini-grrawer excavator ilingana nayo
Injini ye-Koop enamandla okanye ethembekileyo okanye i-Yanmar injini inika amandla aphezulu ehashe kunye nokusebenza ngobungakanani be-compact ukukunceda usebenze kwisithuba esilinganiselweyo.
Inkqubo yokungena kwamanye amazwe kunye neendlela zokuqhuba zokuqhuba zinika ulawulo olugudileyo kunye nokusebenza lula.
Uluhlu lwezixhobo zilungelelaniswe nommbiwa wokukhulisa intsebenzo kunye nexabiso elifanelekileyo ngokuvelisa kakhulu.
Igama lebrand Ukunyaniseka
Umenzi Iindleko zezabelo Dalian Honest Equipment Co., Ltd.
Ubunzima bokusebenza 1350 kg
Umthamo wamabhakethi 0.03cbm
Imowudi yokusebenza Isixhobo soomatshini
Ububanzi beebhakethi 380mm, ungadibanisa emele emxinwa 200mm
Injini Koop292, 12kw isilinda kabini, ungakhetha Euro 5
Ukutywina iRingi NOK
Imoto yokuhamba ISANYO okanye i-Eaton
Imoto ejikelezayo ISANYO okanye i-Eaton
Isilinda Isilinda enye
Uhlobo lomkhondo Umkhondo weRubber
Iklabhu evaliweyo Hayi
Ukunyuka kwamandla 35º
Amandla okumba ibhakethi 13.5kn
Amandla okumba ingalo 10.8kn
Isantya sokuhamba 3km / h
Itotali (ubude * ububanzi * ukuphakama) 2950x980x1800 mm
Ubude bomkhondo * ububanzi Ubukhulu: 1250mm * 180mm
Umgama womhlaba weplatform 420 mm
Ububanzi beChassis 980 mm
Uluhlu lokuSebenza 360 °
Ubunzulu bokumba 1650 mm
Ukuphakama kwemigangatho yokuphakama 2500 mm
Ubungakanani bendlela yokuguqula 2900 mm
Min. irediyasi ye-gyration 1550 mm
Egqithileyo Imodeli ye-HE13 encinci yokukhasa eyenziwe e-china iyathengiswa
Okulandelayo: I-CE ye-ISO eqinisekisiweyo yeModeli ye-HE17 Chinacheap Excavator YOKUthengiswa
Icwecwe elincinanana lokumba
Iindleko zeMini encinci
Iphakheji ye-Mini Excavator
Imodeli ye-CE ISO eqinisekisiweyo ye-HE20 Mini Cralwer Digger ...
Imodeli ye-CE ISO eqinisekisiweyo ye-HE17 Chinacheap Excavato ...
I-Model10 i-excavator encinci eyenziwe nge-china fo ...
Imodeli ye-HE08 eyona incinci yokumba ikhuphe ...
CE ISO Certified Model HE35 qha Excavator M ...
I-CE ye-ISO eqinisekisiweyo yeModeli eyi-12 Mini yegadi ...